Laptọọpụ egwuregwu. Kedu laptọọpụ egwuregwu kacha mma nke 2022?
Echiche nke ntụnyere a bịara mgbe enyi m Sergio gwara m ka m chọta ya ezigbo nlereanya n'etiti egwuregwu laptọọpụ. Ọ gwara m "Enwere m mmefu ego nke € 500-600 na achọrọ m igwu egwu League of Legends." M zara ya na ọ dịtụ ihe siri ike mana ọ ga-ahụ ya.
Anyị na ndị otu ahụ, anyị achịkọtala kọmpụta egwuregwu kacha mma na ndị kacha ere n'ahịa. Anyị atụlewo ọnụahịa na mma. Nke a abụrụla nsonaazụ ikpeazụ nke ihe bụ mma ihe ị na-akwụ maka. Na nyocha a, ị ga-ahụ:
1 Tụnyere laptọọpụ egwuregwu
2 Kachasị mma nke laptọọpụ egwuregwu n'okpuru € 1.000
3 Laptọọpụ egwuregwu kacha mma dị ọnụ ala 800
4 Laptọọpụ egwuregwu kacha mma
5 Nhọrọ dị ọnụ karịa. Acer Predator
6 Akwụkwọ ndetu HP gamer
7 Kedu ihe bụ laptọọpụ egwuregwu
8 Otu esi ahọrọ laptọọpụ egwuregwu kacha mma
8.4 Draịvụ ike
8.5 Ihuenyo (nha na mkpebi)
8.7 Igwe nju oyi
8.8 Ọdụ ụgbọ mmiri na njikọta
9 Ụdị Laptọọpụ egwuregwu kacha mma
10 Ekwesịrị m ịzụ ya?
11 Uru nke laptọọpụ egwuregwu
12 Ọdịmma nke laptọọpụ egwuregwu
13 Ị nwere ike ịzụta laptọọpụ egwuregwu maka euro 500?
14 Olee otú anyị họọrọ?
15 Ihe anyị na-atụ anya!
15.1 Ndị ọzọ ga-atụle (mana nke anyị anaghị akwado)
16 Mkpebi na laptọọpụ egwuregwu
Tụnyere laptọọpụ egwuregwu
Na nke a tụnyere nke egwuregwu laptọọpụ Anyị achịkọtala ụdị ndị kacha amasị anyị ka ị wee họrọ nke kacha dabara na mmefu ego gị. Enwere nhọrọ dị ọnụ ala na ndị ọzọ na ọnụ ahịa dị elu ma ọ dị m nwute ịgwa gị mana ịzụrụ laptọọpụ gamer na-adịkarị ọnụ karịa maka ebumnuche ọ bụla.
Kachasị mma nke laptọọpụ egwuregwu n'okpuru € 1.000
Mgbe ọtụtụ, ọtụtụ awa nke nyocha na ule, anyị ekpebiela nke ahụ MSI GF63 n'okpuru 1000 euro bụ nke kacha mma n'ime laptọọpụ egwuregwu anyị nwalere., nke a bụ n'ihi na ya arụmọrụ egwuregwu na ọnụ ala ya dị ala mee ka ọ bụrụ uru kacha mma maka laptọọpụ ego maka egwuregwu.
MSI GF63 nwere ọmarịcha ihe nrụpụta pụrụ iche, ọkachasị ma atụnyere asọmpi ya. N'echiche a, anyị enyochala na ọ na-edobe akụkụ ndị kachasị na kọntaktị na onye ọrụ na okpomọkụ siri ike mgbe niile, nke a na-apụghị ikwu maka laptọọpụ ndị ọzọ na-egwu egwu nke anyị nyochara, na, na mgbakwunye, ọ nwere a ahụigodo dị nnọọ mma.
MSI GF63 nwere kaadị eserese GeForce GTX 1650 nwere 4 GB nke ebe nchekwa, ihe Intel Core i7-10750H processor, 16 GB nke RAM na 1 TB SSD ike..
Dịka kọmpụta egwuregwu niile dị na oke ọnụ ahịa ya, MSI na-ekpo ọkụ ntakịrị, mana ọ na-adị jụụ karịa PC ndị ọzọ anyị nwalere. Ihuenyo MSI nwere ike ịka mma, mana ọ siri ike ịchọta laptọọpụ egwuregwu dị ọnụ ala nke nwere ihuenyo mara mma. N'agbanyeghị mmejọ ndị a, Asus bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na laptọọpụ egwuregwu kacha mma dị ọnụ ala na ahịa.
MSI GF63 bụ aka eweda laptop kacha mma maka onye ọ bụla na mmefu ego. Ọ dị ike, dị ọnụ ala, yana emekwara ya nke ọma. Laptọọpụ egwuregwu niile dị ọnụ ala anyị nwalere nwere arụmọrụ egwuregwu yiri nke ahụ, mana anyị na-ewere Asus ka ọ kacha mma n'ihi na ọ dị ọnụ ala ma nwee ogo ka mma karịa ndị ọzọ.
Dị ka laptọọpụ egwuregwu mmefu ego niile anyị nwalere, MSI GF63 na-ekpo ọkụ karịa ka anyị chọrọ, na-eru n'elu na oke okpomọkụ nke 38.8 degrees. Agbanyeghị, a na-edobe ala chassis na igodo WASD na 33.3 ma ọ bụ 34.4 degrees Celsius, nke anyị enweghị ike ikwu maka ụdị ndị ọzọ. Kedu ihe ọzọ, Fans anaghị ada ụda na-adọpụ uche anyị Mgbe ị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ na-ekiri ihe nkiri, ahụigodo ahụ na-achagharị azụ na trackpack dị ezigbo mma.
Laptọọpụ egwuregwu kacha mma dị ọnụ ala 800
Ndị egwuregwu siri ike ga-achị ọchị n'echiche ahụ na enwere ike ịnwe laptọọpụ egwuregwu na-erughị € 800 nke kwesịrị ya. PC egwuregwu mmefu ego siri ike anaghị ekwe ka ị jiri njirimara ihuenyo kacha mma kpọọ akụkọ kachasị ọhụrụ. Ma ọ bụrụ na ịchọghị ịma banyere nkọwa dị elu mana ịchọrọ igwu egwu na-enweghị ọsụ ụzọ, ị nwere nhọrọ na-adọrọ mmasị nke na-agaghị emebi akaụntụ akụ gị.
Laptọọpụ egwuregwu na-erughị euro 600 nwere ike inwe ọtụtụ ọghọm, n'agbanyeghị anyị achọtala nhọrọ kacha mma maka ọnụahịa a. Ọ bụ ikpe nke Acer Aspire 5 na-efu ihe dị ka euro 599, na maka ọnụ ala dị ọnụ ala ị nwere ihuenyo 1080p, 8GB Ram, ihe nhazi i7 na ihe kacha mkpa na ngalaba a, ole na ole Ihe eserese nke Intel HD. A na-agụnye ihe nhazi nke bụ ọganihu dị ukwuu ma e jiri ya tụnyere kọmpụta dị n'etiti, dị ka a ga-asị na nke ahụ ezughị, ị nwere 512GB SSD nke ebe nchekwa dị n'ime ka ị nwee ike tinye faịlụ, ihe nkiri na data ịchọrọ ka emeghe ngwa ngwa ngwa ngwa.
Acer Gbasara 5 A514-52 -...
Ọ dị mma maka ndị na-egwu egwu ugboro ugboro. Ọ ga-amasị ha ịchọta nke a eserese nke kacha mma maka laptọọpụ egwuregwu na-erughị 800 euro. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ kaadị kacha mma maka ọnụahịa a. Ọ dị nnọọ ka GeForce MX120 mana ọ nwere ọsọ ọsọ 5% nke na-eme ka eserese na-agba ọsọ ọsọ karịa ụdị ndị gara aga. Nke a pụtara na ị nwere ike igwu egwuregwu kachasị ọhụrụ n'afọ a na eserese nkọwa zuru oke yana mkpebi WXGA (1366 x 768). Enwere ike ịme egwuregwu ndị kachasị ike nke ọma ma ọ bụrụ na ị na-edozi eserese ka ọ bụrụ mkpebi dịtụ ala yana nkọwa dị ntakịrị.
Core i7 nke o nwere na-eme ka ọ merie ụdị ochie site na 15 ruo 25%. Na kọmpụta egwuregwu nke a pụtara ike kpọọ egwuregwu kacha ọhụrụ na mkpebi dị elu, na maka ọrụ ndị ọzọ na-achọ ihe dị ka multimedia, nrụpụta ọrụ na mmemme na-achọsi ike. Ọzọ na ihe karịrị 500GB Ọ na-enye gị ọtụtụ ohere, na ịbụ SSD ọ ga-aga ngwa ngwa mgbe ị na-echekwa karịa ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na diski ike HDD. N'ọnọdụ onye ọrụ chọrọ, ọ nwere ike ịgbanwe diski ike kwuru n'enweghị nsogbu.
Ọ nwere ihuenyo 14 inch na mkpebi nke 1920 × 1080 na panel bụ ihe elu IPS dị ukwuu. Ọ bụkwa eziokwu na mgbe a na-ele ya anya site n'akụkụ doro anya na-akawanye njọ, n'agbanyeghị na nke a anaghị eme n'ọtụtụ oge. Ọ na-abịa na ya Windows 10 nke emebere ka ọ bụrụ nke na-emetụ aka mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma dịka ọ dị. Cheta na na Asus a enweghị nhọrọ ihuenyo mmetụ.
Laptọọpụ egwuregwu kacha mma
Kọmputa a nwere ike ime ka onye ọ bụla na-egwu egwuregwu na-agụ banyere ya ụjọ, nke ọma. Ọ bụ kọmpụta nanị site n’ile ya anya, anyị maara na e bughi n’obi ka e jiri ya na-ede ihe n’ọfịs ma ọ bụ na-eme akwụkwọ ozi. Nwee a ike imewe, siri ike na igodo ndị nwere agba, ihe niile anyị nwere ike ịtụ anya na laptọọpụ nke ebumnobi anyị na-agaghị agwụ ike. Ọ baghị uru ebe i si lee ya anya. Nhazi ahụ masịrị ya.
N'ime, MSI GT76 Titan adịchaghị mma. Jiri a i7-10700K processor 8-isi ọgbọ ikpeazụ nke anyị nwere ike ibugharị egwuregwu ọ bụla. Ma ọ bụghị naanị nke ahụ: anyị nwere ike ịkwaga ha na-enweghị ihe mgbochi, nke gụnyere inwe ike iji mmetụta niile (ewepụghị ihe iji melite arụmọrụ) ma gbasaa egwuregwu anyị na ikpo okwu egwuregwu dị ka Twitch.
Naanị ihe nhazi nke ọma ezughị iji mee ka egwuregwu na-aga nke ọma. Maka nke ahụ ị chọkwara ezigbo RAM, na Titan a nwere 32 * 2GB, nke bụ ụzọ ọzọ e si ekwu na o nwere 64GB kewara na kaadị ebe nchekwa DDR4 2666MHz abụọ. Ihe dịkwa mkpa maka egwuregwu dị arọ ka ọ na-aga nke ọma bụ kaadị eserese, na GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 na-emesi anyị obi ike ọ bụghị naanị na anyị ga-enwe ike ịkpọ aha niile na-achọsi ike taa, kamakwa aha niile ga-eme n'ọdịnihu ga-ahapụ n'afọ ndị na-abịanụ.
Ọ dịghị obere mkpa na kọmputa maka gamers bụ ya ike mbanye. Na ngalaba a enwere isi ihe abụọ dị mkpa: nchekwa na ụdị diski. MSI GT75 Titan na-enye nkọwa dị mma na ngalaba abụọ a. N'otu aka, ndị draịvụ ike nke gụnyere bụ 2TB, nke na-eme ka anyị hụ na anyị nwere ike itinye ọtụtụ egwuregwu ọbụlagodi na ha dị oke arọ. N'aka nke ọzọ, ụdị diski ọ gụnyere bụ SSD, ma ọ bụ ihe bụ otu, ọgbọ ọhụrụ draịva siri ike nke na-enye ọsọ ọsọ ọgụgụ na ide ihe. N'ihi nke a, ntinye nke egwuregwu ahụ ga-adị ngwa ngwa na, otu ugboro na kọmputa anyị, imeghe ha ga-abụkwa ihe nke sekọnd.
Ihuenyo ọ gụnyere na-amasịkwa ya. Ọ bụ a 17.3 ”ihuenyo, nke dị sentimita abụọ n'ogologo karịa kọmpụta ndị nwere oke nha. Dị ka a ga-asị na nke ahụ ezughi oke, mkpebi nke nnukwu ihuenyo a bụ 3840 x 2160, nke na okwu ndị ọzọ bụ otu ihe ahụ na-ekwu na ọ bụ ihuenyo 4K. Kwere m mgbe m na-ekwu na àgwà a na-ahụ anya na na, ọ bụrụ na ị chọpụtalarị ihe dị iche na ihuenyo 1080p, chee echiche otú egwuregwu si ele anya na kọmputa nwere ihuenyo nke nha na mkpebi a. Na-adọrọ mmasị.
Ọ bụrụ na ị ga-etinye "mana" na otu a, "ma" ahụ ga-adị na arọ nke laptọọpụ. Ibu nke MSI Titan a bụ 4.56kg, nke dị iche na 1kg nke laptọọpụ ndị ọzọ nwere ike ịtụ. Ma buru n'uche na emeghị ngwa a ka ọ dị mma, kama ọ dị ike. Kilo anọ na ọkara ahụ gụnyere ihuenyo kachasị ukwuu, keyboard a na-echekarị na egwuregwu karịa ederede, nnukwu draịvụ ike, nnukwu okwu ya na, na nkenke, kọmpụta siri ike nke na-enweghị mmejọ.
Maka ihe ọ bụla ọzọ, ọ gụnyere nkọwapụta nke laptọọpụ ọgbara ọhụrụ, nke anyị nwere njikọ WiFi 802.11 A / C, 3 USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri HDMI, PCI-E na ọdụ ụgbọ mmiri ethernet.
Sistemu eji arụ ọrụ nke anụ ọhịa a gụnyere bụ Windows 10 Home. Maka onye egwuregwu ọ bụla, nke a dị mma maka ebumnuche abụọ: Nke mbụ bụ na egwuregwu niile dị mkpa dị maka sistemụ arụmọrụ Microsoft. Ihe nke abụọ kpatara ya bụ na Microsoft kwere nkwa ọtụtụ afọ gara aga na Windows 10 ga-abụ ụdị sistemụ arụmọrụ ya kachasị ọhụrụ, nke pụtara na anyị ga-enweta mmelite maka ndụ.
Nhọrọ dị ọnụ karịa. Acer Predator
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ Asus GL553 ma ọ bụ ọ bụrụ na ọnụ ahịa ya rịgoro, anyị na-akwado ya Acer Predator. Anyị jiri ihe nhazi Intel Core nwalee nhazi etiti i7-10750HQ, otu GTX 1080 (GDDR6) site na Nvidia GeForce nwere 8GB nke ebe nchekwa eserese, 16GB nke RAM, na draịvụ ike 1TB SSD.
Onye na-eri anụ Acer nwere ahụigodo na ndị na-ekwu okwu ka mma karịa Asus GL553 Ọ na-emekwa ka ihe ndị mejupụtara ya dị jụụ karịa kọmpụta ndị ọzọ dị ọnụ ala anyị nwalere. Agbanyeghị, ọ bụghị ndụmọdụ anyị kachasị elu dị ka igodo na bọtịnụ WASD Acer Predator dị ọkụ na njedebe nke marathon egwuregwu anyị na ọ bụ ngosipụta kachasị njọ nke ndị asọmpi atọ ahụ.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị kwadoro Asus n'elu Acer Predator, ọ bụ n'ihi na Acer na-ekpo ọkụ na mpaghara kọntaktị dị elu, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ihe dị n'ime ya na-adị jụụ. Mgbe otu awa nke egwu Path of Exile gasịrị, igodo WASC dị na 43.22 degrees na ala nke laptọọpụ na 44.33. Ha abụghị okpomọkụ na-ere gị ọkụ na kọntaktị, mana ha dị elu nke ukwuu na ị gaghị enwe ahụ iru ala. Ike ahụ dị na kọmpụta a nwere na-enye gị ohere iji eserese kacha mma gwuo egwuregwu mana ọ na-ebutekwa ọkụ.
Okpomọkụ elu Acer bụkwa nke kachasị elu n'ime ndị ikpeazụ atọ, 49.22 n'elu ahụigodo. CPU ya nọrọ jụụ karịa nke Asus, 73 Celsius C vs 77 Celsius C, mana kaadị eserese ya dị ọkụ, 70 Celsius C ruo 65 Celsius. Dịka ndị nọ na Asus GL553, ndị na-akwado Acer Predator na-anụ ma ọ bụghị iwe..
Akwụkwọ ndetu HP gamer
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na egwuregwu vidiyo na ị na-eche echiche ịnweta kọmputa Laptọọpụ egwuregwu kacha mma, ike na arụmọrụ, nke ị ga-eji nwee ahụmịhe kachasị mma na-egwu egwuregwu vidiyo kachasị amasị gị, HP Pavilion Gaming bụ naanị ihe ị na-achọ.
Egwuregwu HP Pavilion, nke bụ aha zuru oke nke igwe a na-enweghị atụ, nwere ike ịbụ laptọọpụ kachasị mma gburugburu taa dịka o nwere ngwaike kachasị elu, dị ike na nke dị mma na teknụzụ ngwanrọ.
Ihe mbụ na-adọta anya gị bụ nnukwu ihuenyo IPS ya 16,1 sentimita asatọ nwere ogo HD zuru oke na mkpebi nke 1920 × 1080 nke ị ga-enwe obi ụtọ ọ bụghị naanị egwuregwu kachasị amasị gị, kamakwa ihe nkiri na usoro ọkacha mmasị gị, yana ogo onyonyo enweghị atụ.
The HP Pavilion Gaming na-agba ọsọ Windows 10 dị ka sistemụ arụmọrụ na n'ime ya na-akwado ya site na Intel Core i7-10750H processor nke nwere ọsọ elekere n'etiti 2,6 na 5 GHz. Tinyere ihe nhazi a anyị na-ahụ. Kaadị eserese NVIDIA GeForce GTX 1650Ti na 16 GB nke DDR4 Ram (2 x 8 GB). Na ihe a niile, HP Pavilion Gaming na-enye ọsọ ọsọ, arụmọrụ na ike arụ ọrụ nke a na-ahụtụbeghị mbụ, nke na-abawanye ma kwadoro ekele maka usoro nchekwa ngwakọ ya jikọtara ya na diski 1TB SSD nke ị nwere ike ijikwa egwuregwu gị na faịlụ ndị ọzọ na-enweghị nsogbu ohere. na ọsọ zuru oke.
Ma n'ezie, anyị agaghị echefu na ọ nwere WiFi 802.11 A / C Njikọta, abụọ USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri, SATA connectivity, Bluetooth, ọtụtụ batrị nke mere na ị nwere ike ịnụ ụtọ amara-ogologo egwuregwu, na akụkụ na arọ (naanị 3,25 kilos) dị mma iburu ya n'akpa azu (na-eburu n'uche ngwaike ọ na-ebu na nha ihuenyo ya)
Kedu ihe bụ laptọọpụ egwuregwu
Site n'aha nke aka ya, anyị nwere ike ịmata ya, laptọọpụ egwuregwu bụ laptọọpụ Emebere ya ka o wee nwee ike iji ya gwurie egwu. Isi ọrụ nke a ga-eji maka ya bụ igwu egwu. N'ihi nke a, ụdị ụdị ndị a nwere usoro njirimara nke dị iche na nke ndị ọzọ nkịtị.
Egwuru egwu bụ ọrụ chọrọ ọtụtụ akụrụngwa, yabụ, na laptọọpụ egwuregwu, anyị na-ahụ ndị nrụpụta dị ike karị, ihuenyo nwere mkpebi ka mma, na mgbakwunye na usoro dị jụụ dị elu karị, nke na-enye ohere iji nọgide na-enwe okpomọkụ ọbụna mgbe onye nrụpụta na-arụ ọrụ na ike ya kachasị.
Otu esi ahọrọ laptọọpụ egwuregwu kacha mma
Mgbe ị na-ahọrọ laptọọpụ egwuregwu anyị kwesịrị ịtụle akụkụ dị iche iche. Ịrụ ọrụ nke ọma n'akụkụ gị dị mkpa. Ya mere, anyị ga-aṅa ntị nke ọma na nkọwa ya. N'ebe a, anyị na-ahapụrụ gị akụkụ ndị bụ isi ị ga-aṅa ntị na:
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke laptọọpụ na mpaghara a jiri Intel Core i5, i7 ma ọ bụ i9. Nke ọ bụla n'ime ezinụlọ atọ a ga-eme nke ọma ma a bịa n'ịrụ ọrụ na inwe ike igwu egwu, mana ọ bara uru ịhọrọ nke abụọ ma ọ bụ nke atọ ma ọ bụrụ na ihe anyị nwere mmasị bụ egwuregwu vidio. Iji kọwaa nkọwa, i9 kacha mma ma ọ bụrụ na egwuregwu kachasị amasị anyị bụ ndị na-enye eserese dị mma na, nakwa, ọtụtụ nkọwa, nke gụnyere textures na ụdị mmetụta ọ bụla.
AMD bụ ụlọ ọrụ ọzọ na-emepụta ezigbo nhazi. N'ezie, asịrị na-ekesa na e mere Intel i9 ka ọ bụrụ asọmpi AMD Ryzen 7, ihe nhazi nke karịrị Intel i7. Ezinụlọ Ryzen na-amalite na 3, mana anyị na-ekwu maka obere ihe nrụpụta ma ọ bụrụ na ebumnuche anyị bụ igwu egwuregwu vidiyo. Ryzen 5 na Ryzen 7 ga-enye anyị ezigbo arụmọrụ mgbe ị na-egwu egwuregwu na nso nso a ha ewepụtala Ryzen 9, ihe nrụpụta nke ga-enye anyị ohere igwu egwu ọbụna utu aha kachasị achọ na-enweghị ọdịda.
Ihe nhazi abụghị naanị ihe anyị ga-eburu n'uche. Ọzọkwa ọsọ ya bụ ihe dị mkpa, n'ihi na a pụrụ inwe isi ọdịiche dị n'etiti laptọọpụ. Echiche ọzọ dị mma bụ iji tụnyere njirimara microprocessor. Ọ bụ n'ụdị akụkụ ndị a ka anyị na-ahụ ọdịiche dị mkpa, nke na-enye ohere nhọrọ ziri ezi maka ihe anyị na-achọ.
Kaadị eserese NVIDIA bụ nke a na-ahụkarị n'ahịa. Ha bụ nhọrọ dị mma maka laptọọpụ egwuregwu, ebe o doro anya na ha ga-enye anyị ezigbo arụmọrụ. Ọ bụ ezie na anyị ga-eburu n'uche mkpebi nke anyị chọrọ igwu egwu, ịhọrọ nke kachasị mma maka ihe anyị chọrọ n'ọnọdụ anyị. GeForce GTX 2050, 2060 na 2070 bụ otu n'ime ndị kachasị ike ma ga-enye anyị ohere igwu egwu na mkpebi kachasị elu.
Ọ bụ ezie na ọ na-arịwanye elu nke ahụ ka anyị leba anya na-egwu na 4K. N'okwu ahụ, nke kachasị ike na nke kachasị mma na-arụ ọrụ bụ GeForce GTX 2080, nke bụ ihe osise kachasị ike nke NVIDIA nwere taa.
AMD na-enyekwa kaadị eserese nke ya nke ọ na-ere n'okpuru aha Radeon. N'ezie, ụfọdụ mgbasa ozi pụrụ iche na-ekwu na kaadị eserese kacha mma egwu bụ akara AMD. radeon, karịchaa RX 5700 nke, n'etiti ihe ndị ọzọ, na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na-egwu egwu na 4K. Na, dị ka ndị na-emepụta ihe, ihe kachasị mma banyere AMD bụ uru maka ego nke ga-eme ka anyị nwee ike ịnọgide na-eme ihe kacha mma na ọbụna karịa ya na-enweghị akwụ ụgwọ ọzọ.
N'akụkụ a, anyị enweghị ike ịhapụ. Anyị chọrọ opekata mpe 16 GB nke RAM na laptọọpụ egwuregwu. Nke a dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị na-atụ anya ịrụ ọrụ dị mma na ya. N'ụzọ ezi uche dị na ya, RAM nwere ikike ka ukwuu, dị ka otu 16 GB, bụ nhọrọ ọzọ dị mma, ọkachasị maka ndị egwuregwu na-achọsi ike ga-eji laptọọpụ ahụ ike.
Ọ bụ ezie na a ghaghị iburu n'uche na ihe nlereanya nwere 16 GB nke RAM ga-adị ọnụ karịa nke nwere 8 GB. Ya mere ọ bụ ihe ị ga-eburu n'uche, ma ọ bụrụ na ị nwere oke mmefu ego. Ihe nwere ike ịmasị bụ ịnwe ihe nlereanya na 8 GB nke RAM, mana nke ahụ na-enye ohere nke ịgbasa RAM kwuru. Ọ bụ nhọrọ dị mma, dịka enwere ike ịgbasa ya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Otu n'ime ihe mgbagwoju anya maka ọtụtụ ndị ọrụ. Egwuregwu na-ewekarị ohere nchekwa. Yabụ na anyị kwesịrị ịnwe draịvụ ike nwere ikike zuru oke. Ọ bụ ezie na anyị chọkwara ka ọrụ ahụ bụrụ ngwa ngwa na mmiri, yabụ SSD bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị karịa n'echiche ahụ. Ihe ngwọta dị mma bụ ngwakọta nke usoro abụọ ahụ, nke na-arịwanye elu na laptọọpụ egwuregwu.
Ngwakọta nke SSD na HDD na-enye anyị ihe kacha mma n'ụwa abụọ. Na SSD ị nwere ike ịnweta sistemụ arụmọrụ na ngwa, maka ịrụ ọrụ dị nro ma nwee HDD dị ka nchekwa, ebe anyị ga-enwe ohere buru ibu. Ya mere, anyị na-ejikọta nhọrọ abụọ ahụ anyị chọrọ, iji nweta ohere zuru oke, mana ka kọmputa ghara ịrụ ọrụ nke ọma dịka o kwere mee.
Dị ka ọ bụ mgbagha, nhọrọ ga-adabere n'iji onye ọrụ ọ bụla eme ihe. Enwere ike ịnwe ndị ọrụ chọrọ laptọọpụ egwuregwu maka ọtụtụ ọrụ, ebe ndị ọzọ na-eji ya naanị maka egwuregwu. Dabere na ojiji, ị kwesịrị ịtụle nhọrọ kacha mma, ma ọ bụrụ na SSD, HDD ma ọ bụ ngwakọta nke sistemụ abụọ ahụ.
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na laptọọpụ egwuregwu. Ogo ihuenyo bụ ihe ga-eme kpebisie ike na ahụmahụ ojiji nke kwuru na laptọọpụ. Ya mere, ọ dị mkpa ịhọrọ ihuenyo nke kọmputa anyị ga-enwe nke ọma. Enwere ọtụtụ akụkụ anyị ga-atụle gbasara ihuenyo: nha, mkpebi, ọnụego ume ọhụrụ na oge nzaghachi.
Ogo nke ihuenyo bụ ihe na-adabere na mmasị nke onye ọ bụla. Ihe nkịtị n'ahịa a bụ nke ahụ dị ihe dịka sentimita iri na ise ma ọ bụ karịa. Ya mere, ọ na-adịkarị ma ọ bụ na-adịkarịghị achọta nke dabara nke ọma na ọchịchọ nke onye nke ọ bụla. Ọ bụ ezie na ihuenyo buru ibu nwere ike inye ahụmịhe onye ọrụ na-emikpu ntakịrị, nke ọtụtụ na-ahọrọ.
Mkpebi ihuenyo dị mkpa, n'agbanyeghị na ọ na-agakarị aka na eserese dị na laptọọpụ. Dịka anyị kwuru n'elu, eserese dị ka GeForce GTX 1050, 1060 na 1070 ga-enye anyị ohere igwu egwu na 1080p. Ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga n'ihu n'ihu ma kpọọ na 4K, ihe na-arịwanye elu, anyị ga-agbanye nzọ na ihe dị ike karị, dị ka GeForce GTX 1080. Ọ bụ nhọrọ kacha mma dị ugbu a na nke a.
4K adịghị mkpa ịnụ ụtọ egwuregwu na laptọọpụ egwuregwu a. Ma ọ bụ ihe na-enweta mkpa, karịsịa n'ihi na egwuregwu ndị ọzọ nwere mkpebi a. Ya mere, enwere ike ịhụ ya dị ka nzọ ogologo oge, ịzụta ihuenyo nwere mkpebi 4K ma ọ bụ nkwado maka ya.
Oge nzaghachi na ọnụego ume ọhụrụ bụ isi ihe abụọ ọzọ. N'ihe banyere nke mbụ, anyị chọrọ ka laptọọpụ egwuregwu a nwee oge nzaghachi dị ala, nke na-enye ohere ịme egwuregwu na-adịghị mma ma na-egbochi ikiri ma ọ bụ ihe oyiyi ahụ ka ọ ghara ịjụ oyi obere oge. Ọ ga-abụrịrị n'okpuru 5 ms mgbe niile. Mgbe ọnụego ume ọhụrụ, anyị chọrọ ka ọ dị elu dịka o kwere mee. Agbanyeghị na ọ dabere na GPU nke laptọọpụ nwere.
Ihe ọzọ dị mkpa maka ezigbo ahụmahụ egwuregwu na ịghara ịhapụ nkọwa mgbe anyị nọ na egwuregwu. N'echiche a, ika ọ bụla na-enye nkọwa nke ya na ihe maka ụda ka mma. Yabụ na anyị nwere ike ịchọta nkọwapụta dị iche iche, dị ka okwu dị iche iche ma ọ bụ nkwalite site na ngwanrọ.
Ihe dị mkpa n'ezie na nke a bụ nke ahụ ụda dị mma iji ekweisi. Ọtụtụ ndị na-eji laptọọpụ egwuregwu na-ejikarị otu egwu egwu egwu. Ya mere, anyị ga-atụle na ụda dị ike zuru oke mgbe anyị na-eji ha, n'etiti 55 na 60 dB. Ọ dịkwa mkpa na ọ dị nkọ.
N'ịhọrọ ekweisi nke anyị na-eji na laptọọpụ egwuregwu, nkasi obi nke iji, nke bụ headband ma nwee ụfụfụ na ntị, na mgbakwunye na inwe ike. Nkagbu Noise. Ọ ga-eme ka anyị lekwasị anya n'egwuregwu ahụ n'ụzọ ka mma mgbe niile.
Iji ngwa ngwa nke laptọọpụ egwuregwu na-enwekarị nsonaazụ na okpomọkụ ya na-abawanye nke ukwuu. Ya mere a ezigbo usoro jụrụ oyi Ọ dị mkpa idobe okpomọkụ na mmiri ma gbochie ya ka ọ dị elu. Anyị na-achọta usoro dị iche iche dị iche iche na nke a, nke nwere ike ịdị iche dabere na ime na ihe nlereanya.
Anyị nwere ike ịchọta nhọrọ dị ka mmiri jụrụ oyi, n'agbanyeghị ihe dị anyị mkpa n'ọhịa a bụ na ọ dị irè. Anyị chọrọ ka ọ rụọ ọrụ nke ọma ma rụọ ọrụ ya mgbe niile. Iji mee nke a, ọ kacha mma ịgụ nyocha na ọkwa nke laptọọpụ ahụ, yana nkwupụta sitere n'aka ndị zụrụ ya. Ọ ga-enye anyị ozi zuru oke iji mara ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Anyị enweghị ike ichefu ọnụ ọgụgụ ọdụ ụgbọ mmiri dị na laptọọpụ ahụ. Ihe dị mkpa, ebe ọ bụ na anyị ga-ejikọta ọtụtụ akụkụ na ya, dị ka ekweisi ma ọ bụ njikwa ọzọ. Ihe na-emebu bụ na laptọọpụ egwuregwu na-abịa na ọdụ ụgbọ mmiri zuru oke, na mgbakwunye na USB ha na-ahapụ anyị ụfọdụ HDMI yana jakị isi.
Ma ọ na-adị mma mgbe niile lelee nkọwapụta gị, iji zere ihe ịtụnanya na-adịghị mma na nke a. Anyị nwere ike ịlele ya ngwa ngwa na weebụsaịtị ya, ma ọ bụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị nọ na ụlọ ahịa ahụ n'onwe ya anyị nwere ike ịhụ ya n'onwe anyị, iji kpochapụ obi abụọ.
Ụdị Laptọọpụ egwuregwu kacha mma
Nhọrọ nke laptọọpụ egwuregwu na ahịa na-eto eto karịsịa. Nke a bụ ihe dị mma, n'ihi na n'ụzọ dị otú a, anyị na-achọta onwe anyị ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na taa. Na mgbakwunye, enwere ụdị ụfọdụ ewepụtara dị ka nhọrọ dị oke mma ịtụle:
Nna-ukwu: EE: Onye na-emepụta Taiwanese bụ otu n'ime ụdị kachasị mkpa na mpaghara a nke laptọọpụ egwuregwu. Ha nwere ụdị dịgasị iche iche nke ụdị, na ha na-abụkarị ndị kasị mma na ndị kasị mma. Yabụ na nke a bụ nzọ dị mma n'akụkụ ndị ọrụ.
Acer: Ụdị ọzọ sitere na Taiwan, nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa maara nke ọma. Ha na-arụpụta kọmpụta n'ụdị akụkụ niile, gụnyere kọmpụta egwuregwu. Ụdị dị ike, nke nwere ezigbo uru maka ego.
HB: Onye na-emepụta America bụ otu n'ime ụdị ahịa kacha ere n'ụwa, nwere otu n'ime katalọgụ kọmputa kachasị ukwuu n'ụwa. N'ime laptọọpụ ha, anyị na-ahụkwa ụdị egwuregwu. Ọnụ ahịa dị mma na nke a na-anabata bụ ihe anyị na-ahụkarị n'ọnọdụ gị.
Alienware: Ụlọ ọrụ America bụ otu n'ime ndị kasị nta n'ahịa, mana ha jisiri ike mee niche na akụkụ nke laptọọpụ egwuregwu. Ha maara otu esi eme ọkachamara na ụdị ngwaọrụ a, na-arụpụta ezigbo ihe. Laptọọpụ egwuregwu zuru oke.
Xiaomi: The Chinese ika bụ otu n'ime ndị kasị mara amara na ubi nke telifon, na mgbakwunye na inwe ezigbo nso nke laptọọpụ, nke kwesịrị iburu n'obi na-n'uche, nakwa mgbe na-egwu egwuregwu. Ha na-apụta maka ọnụ ahịa agbanweela nke ukwuu.
ASUS: Onye nrụpụta ọzọ sitere na Taiwan, nke bụ otu n'ime ihe kacha mara amara na ahịa laptọọpụ. Ogo dị oke mma, dịkwa na laptọọpụ egwuregwu.
Ekwesịrị m ịzụ ya?
Ọ bụghị onye ọ bụla nwere euro 2.000 iji nọrọ na laptọọpụ egwuregwu dị elu nke nwere kaadị eserese dị ike nke ọma iji kpọọ egwuregwu niile dị mgbagwoju anya taa. Maka ndị ọzọ anyị, laptọọpụ egwuregwu dị ọnụ ala bụ nhọrọ kacha mma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ ụmụ akwụkwọ ma ọ bụ ndị ọzọ, chọrọ igwu egwu, mana nwee oke mmefu ego ma chọọ ka kọmputa bụrụ ibu. Ebe ọ bụ na kọmpụta kacha mma dị ọnụ ala nwere sentimita iri na ise, ha aghọwokwa nnukwu nhọrọ maka ndị, na mgbakwunye na igwu egwuregwu, chọrọ laptọọpụ iji rụọ ọrụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, anyị na-akwado ka ị chekwaa ego iji zụta desktọpụ ma ọ bụ laptọọpụ egwuregwu nwere kaadị eserese dị ike karị.. PC 1200 euro ga-adị ike karịa laptọọpụ egwuregwu 2000 na, Ọzọkwa, ọ bụrụgodị na ọ bụ etiti dị ala, enwere ike imelite ya mgbe niile n'ọdịnihu. Ịchekwa maka laptọọpụ egwuregwu dị elu bụkwa echiche dị mma karịa ịzụrụ nke dị ọnụ ala n'ihi na ị ga-enwe ike iji eserese mara mma na-egwu egwu ruo ọtụtụ afọ, karịa ọnwa.
Kọmpụta kọmputa ndị na-egwu egwuregwu dị ọnụ ala na-ejedebe site na kaadị eserese ha, akụkụ nke ị nweghị ike ịkwalite. Na mgbakwunye, kọmpụta ndị a dị ọnụ ala enweghịkwa SSD, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ imelite ya ma emechaa, ị ga-akwụrịrị ụgwọ. Na nkenke, ọ bụrụ na ịzụrụ kọmpụta dị ọnụ ala, ị ga-etinyekwu ego iji kwalite SSD ma melite RAM, ma ọ bụrụ na ịzụrụ kọmputa dị elu, ị ga-enwebu laptọọpụ na SSD yana site na 16 ruo 32 GB nke RAM. Ikwesiri iburu n'uche na laptọọpụ egwuregwu dị ọnụ ala bụ ihe ngwọta nwa oge ga-adịru gị afọ ole na ole, ebe PC ma ọ bụ laptọọpụ dị elu bụ ntinye ego.
Laptọọpụ mmefu ego dị mma maka egwuregwu na-enwekarị Nvidia GeForce GTX 2060 ma ọ bụ kaadị eserese GTX 2070M.Laptọọpụ ndị dị oke ọnụ, n'aka nke ọzọ, nwere GeForce 1060, 1070 ma ọ bụ ọbụna 1080 na ọkwa dị elu nke laptọọpụ egwuregwu. Anyị ga-enyocha echiche a na ngalaba na-esote. Iji nweta echiche nke egwuregwu ị nwere ike na enweghị ike ịme (yana ihe ntọala), ị nwere ike lelee nchịkọta bara uru nke ukwuu. Nyochaa akwụkwọ ndetu site na Egwuregwu Kọmputa banyere kaadị eserese nke laptọọpụ.
Dịka ọmụmaatụ, Dragọn Age: Ajụjụ, Far Cry 4, Middle-earth: Shadow of Mordor, Watch Dogs, na ohi niile na-agba ọsọ n'elu 30fps na 1080p, na Ultra settings, yana na GTX 970M. Egwuregwu ndị ahụ kwesịrị ịgba ọsọ na ntọala dị elu ka ọ na-agba ọsọ karịa 30fps na GTX 860M. Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ ịchọrọ ịme, ị ga-achọpụta na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma dịka ịchọrọ na GTX 860M, o doro anya na ị ga-azụrụ kọmputa desktọọpụ ma ọ bụ laptọọpụ egwuregwu dị ike karị..
Uru nke laptọọpụ egwuregwu
Isi uru nke ụdị laptọọpụ a na-elekwasị anya na ndị egwuregwu bụ nke ahụ ha nwere ike nke ọma karịa ka ọ dị na mbụ na mgbe ụfọdụ a na-ejikọta ha na kọmputa desktọpụ.
Ụwa egwuregwu vidiyo na-achọsi ike ma anyị enweghị ike idozi maka ihe ọ bụla, yabụ, ụdị laptọọpụ egwuregwu a nwere mma mma ihuenyo (akụkụ nlele, nchapụta, mkpebi), trackpad na ahụigodo ziri ezi nwere mmetụ dị ụtọ karịa (dị ka ahụigodo desktọpụ). Ihe a niile na-emetụta ahụmịhe ahụ, ọ ga-emekwa ka anyị nwee ike ịsọ mpi n'ụdị ụfọdụ, ọkachasị na ndị na-agba ụta ma ọ bụ FPS.
Ọdịmma nke laptọọpụ egwuregwu
Laptọọpụ egwuregwu nwekwara ọtụtụ ọghọm ị kwesịrị ịma ka ị ghara inwe nkụda mmụọ:
Ha na-abụkarị nnukwu ibu: Akụrụngwa na-ewekwu ohere, mkpa jụrụ oyi dị elu, ma ọ dị ụkọ bụ laptọọpụ egwuregwu nwere ihuenyo pere mpe karịa inch 15. Ihe a niile na-eme ka ibu na akụkụ na-ata ahụhụ.
Ha na-ekpo ọkụ nke ukwuu: inwe eserese dị ike n'obere oghere dị otú ahụ na-eme ka ọkụ dị ukwuu na-emepụta nke a ghaghị ịgbasa n'ụzọ ụfọdụ. N'ikpeazụ, okpomọkụ nke kọmputa na-ebili nke ukwuu (karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-ebu ya n'otu oge ahụ anyị na-egwu egwu) na a na-etinye ndị Fans na mgbanwe dị elu, ya mere mkpọtụ na-abawanye.
Batrị dị mkpụmkpụ: Isi ihe a bụ ihe ị ga-edo anya nke ọma na nke ahụ bụ na ọ bụrụ na PC desktọpụ chọrọ ike ọkụ nke 850W gaa n'ihu, ị ga-aghọta na inye nri eserese dị ike, ihe nrụpụta dị elu na nnukwu ihuenyo na-eme ka laptọọpụ egwuregwu ahụ. batrị na-adịru obere oge mgbe anyị na-achọ ịrụ ọrụ kachasị site na akụrụngwa.
Ndị a bụ ihe ọghọm kachasị ama ma ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu n'ezie, n'ezie ị nwetalarị ya ma ị gaghị eche na ị ga-eche isi ihe ndị a na-adịghị mma maka ịme egwuregwu kacha mma n'ebe ọ bụla.
Ị nwere ike ịzụta laptọọpụ egwuregwu maka euro 500?
Otu ajụjụ nke ọtụtụ ndị na-azụ ahịa nwere bụ ma ọ ga-ekwe omume ịchọta laptọọpụ egwuregwu dị mma maka ọnụ ala dị ala, dị ka 500 euro. Ọ bụrụ na ị na-achọ ozi gbasara kọmputa na mpaghara ahịa a, ị ga-ahụ nke ahụ ọnụ ahịa ha adịchaghị ala, kama ọnụ.
O di nwute, ịchọta laptọọpụ egwuregwu maka euro 500 agaghị ekwe omume. Anyị nwere ike ịchọta laptọọpụ maka ọnụahịa a, nke nwere ike inye anyị ezigbo arụmọrụ mgbe niile. Ma ọ bụghị kọmputa eji egwu egwu. Ebe ọ bụ na laptọọpụ 500 euro enweghị nkọwapụta ma ọ bụ akụrụngwa anyị chọrọ na laptọọpụ egwuregwu ugbu a.
Ndị nhazi, eserese ma ọ bụ sistemu jụrụ oyi nke anyị na-ahụ na kọmpụta egwuregwu dị oke ọnụ, yabụ ọnụ ahịa ha dị elu. Ha na-agbada ntakịrị ka oge na-aga, n'ihi na enwere ọtụtụ nhọrọ. Mana ọnụ ahịa ha ka dị elu, n'ọtụtụ ọnọdụ karịa 1.000 euro.
Olee otú anyị họọrọ?
Mgbe ịhọrọchara njirisi ndị anyị ga-agbaso iji nyochaa ngwaike, anyị nyochara weebụsaịtị nke ndị nrụpụta laptọọpụ kacha ibu dị ka Lenovo, Asus, Acer, Alienware, MSI, HP, Toshiba na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, anyị na-achọkwa ụlọ ahịa dị ka Clevo, iBuyPower, Origen Digital Storm, n'etiti ndị ọzọ. Agbanyeghị, anyị ahụghị akwụkwọ ndetu ọ bụla zutere ngwaike ekwuputara na ọnụahịa achọrọ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị aghaghị mepụta ndepụta nke laptọọpụ ndị zutere ụkpụrụ anyị ma nweekwa nyocha dị mma site na isi mmalite ozi ntụkwasị obi dị ka CNET, AnandTech, Engadget, Laptọọpụ Mag, PCMag, ma ọ bụ akwụkwọ ndetu.
Anyị wepụrụ kọmpụta niile na-adabaghị n'ihe anyị chọrọ (ihe na-erughị 1200 euro, Nvidia GeForce GTX 860M, Intel Core i7 4700HQ ma ọ bụ ka mma ma ọ dịkarịa ala 8 GB nke RAM). Anyị na-ewepụkwa igwe ndị, dịka nzaghachi onye ọrụ si kwuo, nwere ntụpọ a na-apụghị imeri emeri (dị ka ikpo oke ọkụ). N'ikpeazụ, a hapụrụ anyị na Acer, Asus ma ọ bụ MSI nke laptọọpụ egwuregwu.
Ihe anyị na-atụ anya!
Asus ekwuputala na Computex mmelite nke ihe nlereanya anyị tụrụ aro, GL553, maka June 2019. Mmelite a ga-egosipụta usoro nhazi nke anọ, Intel Core i7 quad-core, na keyboard backlit red LED. Ọzọkwa, ọ ga-abụ na ị ga-enwe draịvụ ike ma ọ bụ SSD na nhọrọ iji kwalite na SSD. Ekwuputabeghị ọnụahịa ma ọ bụ ụbọchị mwepụta, mana anyị ga-eleba anya maka nkọwapụta niile.
Nvidia weputara kaadị eserese GeForce GTX 1080 ọhụrụ na-enweghị oke ọgbaghara gụnyere ya na MSI Titan Pro. Dị ka Notebookcheck si kwuo, 965M nwere arụmọrụ yiri nke ahụ na GTX 870M, ma ọ bụghị ngwa ngwa dị ka anyị na-ahọrọ na ngalaba akwụkwọ ndetu egwuregwu dị elu, GTX 970M. Anyị na-atụ anya ịhụ GTX 965M na kọmpụta mmefu ego ka ukwuu iji kpọọ ọhụrụ ma ọ bụ emelitere n'afọ a.
Ọzọkwa na CES 2019, MSI kwupụtara nhazigharị nke GE60 a kpọtụrụ aha n'elu. Apache GE62 ọhụrụ a na-ekwe nkwa ma na-abịa na kaadị eserese Nvidia GeForce GTX 965M ọhụrụ. Anyị lere ya ngwa ngwa na CES wee nwee mmasị na ahụigodo, trackpad, ngosi, na ogo nrụpụta n'ozuzu ya. Anyị na-atụ anya na ndị egwuregwu abụọ ọhụrụ ga-edobe GE62 jụrụ oyi karịa onye bu ya ụzọ. Nhazi euro 1166 nke GE62 Apache dị mma na mmefu ego anyị, yabụ anyị ga-anwale ya mgbe ọ dị.
Onye nrụpụta ọzọ nwekwara ihe ọ ga-ekwu na CES 2019 bụ Acer. Akpọrọ ihe ọhụrụ ya Aspire V 17 Nitro. Ọ nwere ihe nrụpụta Intel Core i7-4710HQ, kaadị eserese Nvidia GeForce GTX 860M ga-erekwa na February na-amalite na euro 1256. Na mgbakwunye, Acer ga-eji kaadị eserese emelite V 15 na V 17 na March. GTX960M. Mmelite abụọ a yiri ihe na-ekwe nkwa, yabụ anyị na-ekwe nkwa inyocha ha ozugbo ha dị.
Ndị ọzọ ga-atụle (mana nke anyị anaghị akwado)
N'ikpeazụ ụdị abụọ ọzọ m chere na anyị nwere ike iburu n'uche mana nke ahụ n'eziokwu ha erughị eru ya dị ka abụọ gara aga. N'ụzọ bụ isi, ha bara uru karịa 1.000 euro na uru ha na-enye n'ọtụtụ ọnọdụ dị ala karịa ụdị ndị gara aga, mana anyị na-ewetara gị ha maka ozi.
Laptọọpụ dị ọnụ ala kacha mma ị ga-egwu bụ 7 euro Acer Aspire V Nitro VN591-77G-1032FS. Site na processor Intel Core i7-4720HQ, kaadị eserese Nvidia GeForce GTX960M nwere 4 GB nke ebe nchekwa raara onwe ya nye, 16 GB nke RAM, yana draịvụ ike 1 TB jikọtara ya na draịva steeti siri ike 256 GB, ihe nlereanya a nwere ike kachasị ike yana ọnụ ahịa kacha sie ike nke ọnụ ọgụgụ laptops egwuregwu dị n'ahịa n'afọ a.
Ọ bụrụ na ị nwere mmefu ego siri ike karị, anyị na-akwado Acer Aspire V Nitro VN7-591G-70RT maka euro 807 - nke nwere ọkara RAM na enweghị draịva steeti siri ike, mana gụnyere 4 GB nke ebe nchekwa eserese. Agbanyeghị, onye ikpeazụ anyị bụ 62 euro MSI GE082 Apache 987 n'ihi na ọ nwere keyboard ka mma, n'agbanyeghị na o nweghị SSD ma nwee naanị 2 GB nke ebe nchekwa eserese. Kpọtụrụ maka mmelite ndị ọzọ!
Mkpebi na laptọọpụ egwuregwu
Asus ROG GL553JW-DS71 bụ laptọọpụ egwuregwu mmefu ego kacha mma N'ezie, ebe ọ nwere nnukwu atụmatụ maka ọnụahịa ahụ, a na-ewu ya nke ọma ma bụrụ nke dị ọnụ ala na ụdị ya. Ọ nwere ahụigodo dị mma ma na-edobe akụkụ ndị kacha na-akpakọrịta na igwe nju oyi karịa kọmpụta ndị ọzọ na ọnụ ahịa ya nke anyị nwalere. O zughị oke, mana ọ nweghị laptọọpụ egwuregwu dị ọnụ ala dị ugbu a.
Ọ baghị uru ikwu, ị gaghị ahụ laptọọpụ ọ bụla ị ga-eji egwu egwu. erughị 500 euro na ọ bara uru. Cheta na na webụsaịtị laptop anyị dị ọnụ ala anyị na-akwado ndị yiri anyị kacha mma mma na price.
O siri ezigbo ike itinye ozi a niile ọnụ ma ọ bụ nwalee ụdị. Gaa na mmemme, nye ha iwu, wdg. Yabụ ọ bụrụ na ozi ahụ enyerela gị aka, egbula ịza ajụjụ, votu +1, ma ọ bụ mmemme mmekọrịta ọ bụla nke ị nwere ike iji nyere anyị aka.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Laptọọpụ egwuregwu